Thola i-3bhk 1t (1,000 Sq Ft) Apartment In Sector-105 Gurgaon, Gurgaon on RealtyWW Info
xSicela usho indawo noma isigaba
Thola i-3bhk 1t (1,000 Sq Ft) Apartment In Sector-105 Gurgaon, Gurgaon
Ifulethi (i-American English), ifulethi (iBritish English, i-Indian English) noma iyunithi (i-Australia yase-Australia) iyindawo yokuhlala equkethe izindlu (uhlobo lwendawo yokuhlala yangempela) ehlala ingxenye yesakhiwo, ngokuvamile esakhiweni esisodwa. Kunamagama amaningi alezi zakhiwo zizonke, bheka ngezansi. Ukuqashwa kwezindlu kufakwe ngokuhlukahluka kakhulu, kusuka ezindlini ezinkulu zomphakathi, kumnikazi wazo ngaphakathi kwegama elingama-condominium (isihloko sentambo noma indawo evamile), kuya kubaqashi abaqashisa kumnikazi wendawo yangasese (bona indawo yokuqashisa).
IGurgaon, eqanjwe ngokusemthethweni iGurugram, idolobha elisesifundazweni esiseNyakatho ne-Haryana. Itholakala eduzane komngcele we-Delhi-Haryana, cishe amakhilomitha we-30 (19 mi) eningizimu-ntshonalanga yenhlokodolobha yezwe iNew Delhi ne-268 km (167 mi) eningizimu yeChandigarh, inhlokodolobha yesifundazwe. Ungomunye wamadolobha amakhulu wesiphuphutheki eDelhi futhi uyingxenye yeNational Capital Region yaseNdiya. Ngokuya kwe-2011, iGurgaon yayinabantu be-876,900.Gurgaon isiphenduke isiphithiphithi esihola phambili sezezimali nezimboni ngengeniso yesithathu ephezulu kakhulu ngeholo ngalinye eNdiya. Indaba yokukhula komnotho wakuleli dolobha iqale lapho umakhi wezimoto ezihola phambili waseNdiya uMaruti Suzuki India Limited esungula isizinda sokukhiqiza eGurgaon kuma1970s. Namuhla, iGurgaon inamahhovisi endawo ezinkampanini ezingaphezu kwe-250 Fortune 500. IGurgaon ihlukaniswe phezulu kakhulu kwi-Human Development Index, ine-HDI ye-0.889 (2017), nayo ephezulu kakhulu eNdiya. NgoMashi 2019, iGurgaon yaqanjwa igama lomuzi ongcola kakhulu emhlabeni, ngokusho kwemininingwane ekhishwe yi-IQ Air Visual ne-Greenpeace.
I-T noma i-20th i-alfabhethi yesiNgisi sanamuhla kanye nezinhlamvu eziyisisekelo zesi-Latin. Igama laso esiNgisini yithi tee (saphinyiswa), tees plural. Lisuselwa kuncwadi yama-Semitic taw nge-Greek incwadi tau. EsiNgisini, isetshenziselwa kakhulu ukumela i-alveolar plosive engenamazwi, umsindo futhi okhombisa ku-Alpholtiki Yezizwe Ezihlangene. Uhlamvu oluvame ukusetshenziswa kakhulu nencwadi yesibili ejwayelekile emibhalweni yolimi lwesiNgisi.